Akhri Tacadiga Ay Muwaadiniinta Ku Hayso Sompower.
Wednesday July 29, 2020 - 14:06:49 in Articles by Hadhwanaag News
Waxa inala wagaagay walaalkeen Abdiladif Axmed.
Shirkaddan waxay isku aragtaa inay dadka leedahay. Qiso yar ayaa na dhex martay qaar shaqaalaheeda billingka ah. Waxaa dhacday in dhawr jeer gurigayga la tagay looguna hanjabay in laydhka la naga jarayo. Wax lacag ah igu baaqatayna may jirin, kadib anoo aad u cadhaysan ayaa kula kulmay shaqaalaha iyaga gaadhi wata xaafadda dhexdeeda.
Waxaan ku idhi wax lacag ah iguma lihidin cadaynterdina waan haystaa(reciept) maxaad u jeedaan mise korontadiinaba waan idiin daayaa, intay ila yaabeen ayey yidhaahdeen xageed koronto ka helaysaa? Waxay isku arkaan inaan meel kale oo koronto loo doontaa jirin.
Waxaan ugu jawasbay waxaan samaysan tamar nadiif ah (solar energy system) xoog badan inta i dheerna dadka ayaan kasii iibin. Way yaabeen hadana waayo may moodeen inay dadku fikirayaan oo haddi ay macaamilo xumida joojin waayaan badal la samysan karo caqli xumidooda. Intaa ka dib waanu heshiinay imana qaan dhabaan ilaa anigu lacagta iska jeeyo intay doonto dib ha u dhacdee.